Axadda Ciidda Masiixiga, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Waa maxay macnaha iyo muhiimadda Toddobaadka Quduuska ah? Waxaan rajeynayaa in maqaalkani kaa caawin doono inaad u diyaar garowdo xafladaha Toddobaadka Quduuska ah ee aadka u xoogga badan muujinta warka wanaagsan ee Badbaadiyeheenna Ciise Masiix.
Faahfaahinta Axadda Easter-ka ayaa badanaa looga doodi karaa: taariikhda iyo su'aasha ah in ay tahay Easter (adoo tixgalinaya in dhaqammo badan ay jaahiliin yihiin asal ahaan) waa inay dabaaldegaan ama yaanay dhicin. Xubnaha Kaniisada Waayeelka ee Kaniisada Dunida oo dhan (Grace Wadaag Caalami ah) ayaa laga yaabaa inay wali xasuusato inaan xitaa helnay marin ku saabsan mawduuca.
Sikastaba, walaalaha badankood maanta waxay aaminsanyihiin in u dabaaldega sarakicidda sarakicidda ciise aysan aheyn gaalada oo dhan. Ugu dambeyntiina, maalinta Ciidda Masiixiga, wadnaha injiilka waxaa lagu dhawaaqay iyadoo lagu xuso munaasabada ugu muhiimsan taariikhda aadanaha. Dhacdo layaab leh oo ku socota qofkasta oo weligiis noolaa. Waa dhacdada isbedelka ku sameysa nolosheena, hadda iyo weligiisba. Nasiib darrose, dabaaldegyada Istaadku waa uun nooca injiilka loo oggolaaday ee ku saabsan macaamil ganacsi oo ku saabsan qancinta shaqsiyeed iyo dhammaystirka shaqsiga. Fikradaha noocan oo kale ah ayaa leh kuwan soo socda: Adigu qaybtaada ayaad qabaneysaa, Ilaahayna qaybtiisa ayuu sameyn doonaa. Oggolow Ciise inuu noqdo Bixiyahaaga oo addeeca isaga, oo taasna Ilaah baa kugu abaal marin doona halkan iyo hadda wuxuuna ku siin doonaa galaangalka nolosha weligeed ah. Taasi waxay umuuqataa heshiis wanaagsan, laakiin miyaa?
Waa run in Ilaah dembiyadeenna inaga qaado, oo taas badalkeed, wuxuu ina siiyaa xaqnimada Ciise Masiix si aan u helno nolosha weligeed ah. Si kastaba ha noqotee, waa wax aan ahayn heshiiska iibka. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah ma ku saabsan is weydaarsiga badeecada iyo adeegyada labada dhinac. U suuqgeynta injiilka sidii ganacsi oo kale waxay dadka ka dhigeysaa aragtida qaldan. Qaabkan, diiradda ayaa na saaran. Haddii aan oggolaanno heshiiska ama yaan la oggolaan, iyo in kale oo aan awoodi karno iyo in kale, ama in aan la yaabno haddii ay u qalanto dadaalka. Go'aankeenna iyo ficilkeenna ayaa ku yaal xarunta. Laakiin farriinta Ista-ga ma aha asal ahaan annaga, laakiin waxay ku saabsan tahay Ciise. Waxay ku saabsan tahay cidda uu yahay iyo waxa uu nagu sameeyey.
Iyada oo ay weheliso dabaaldegyada Toddobaadka Quduuska ah, Ciidda Axadda ayaa ah isku xirnaanta taariikhda aadanaha. Dhacdooyinku waxay u qaateen sheekada meel kale. Bini aadamka iyo abuuritaanku waxay ku diraan jid cusub. Dhimashadii iyo sarakiciddii Ciise Masiix, wax walba way is beddeleen! Dabaaldegga Ciidda Masiixiga ayaa aad uga badan tusaalaynta nolosha cusub taas oo lagu muujiyo ukunta, bakaylaha iyo moodada cusub ee guga. Sarakiciddii Ciise sarakiciddiisu way ka badneyd soo afjarida shaqadiisa jannada. Dhacdooyinka Ciidda Axadda ee Axadda waxay ku dhawaaqday xaalad cusub. Weji cusub oo shaqadii Ciise ayaa bilaabmay markay ahayd Ista. Ciise wuxuu hadda ku casuumay qof kasta oo isaga u aqoonsada inuu yahay badbaadiyahooda shaqsiyeed inay qayb ka ahaadaan shaqadiisa iyo inay ku dhawaaqaan warka wanaagsan ee nolosha cusub ee uu Masiixu u keeno aadanaha oo dhan.
Waa kuwan ereyadii rasuul Bawlos ku sugan 2 Korintos:
Taasi waa sababta hadda laga bilaabo aynaan garanaynin qof cunnada ka dib; Oo haddaan Masiixa ku garan jirnay jidhka, haddaba garan mayno isaga taas. Sidaa darteed: haddii qof Masiixa ku jiro, waa abuur cusub; Dadkii hore way dhammaadeen, oo bal eega, cusubi wuxuu noqday. Laakiin dhammaantiin waa Ilaah, kan inagula heshiiyey isaga qudhiisa xagga Masiix oo ina siiyey xafiis ku wacdiya dib-u-heshiisiinta. Maxaa yeelay, Ilaah wuxuu ku jiray Masiixa, oo dunida ayuu la heshiiyey, oo isagu dembiyadooda kuma uu tirinin, oo wuxuu dhexdiisii ​​ku soo sara kiciyey ereyga heshiisiinta. Sidaas daraaddeed hadda wakiil ayaynu u nahay Masiix xagga Masiix, maxaa yeelay, Ilaah baa na dhiirrigaliya; Sidaa daraadeed halkii Masiixa aan ku weydiisan lahayn: Aan annagu Ilaah idinla heshiinno! Maxaa yeelay, isagaa sameeyey dembi aan dembi lahayn inuu nagu dembaabo, si aannu innaguna xaqnimada u noqonno Ilaah hortiisa.
Si kastaba ha noqotee, annagoo ah shaqaalaha waxaan kaaga digeynaa inaadan ku heli doonin nimcada Ilaah si aan waxtar lahayn. Sababta oo ah isagaa hadlaya (Ishacyaah 49,8): "Waan ku maqlay markaan nimco ahay oo waan kaa caawiyey maalinta badbaadada. Bal eeg hadda waa wakhtigii nimcada, bal eeg, hadda waa maalintii badbaadinta!" (2 Korintos 5,15: 6,2).
Bilowgii waxay ahayd qorshaha Ilaah inuu cusboonaysiiyo aadanaha isla markaana dhammaystirka qorshahani wuxuu ahaa sarakicidda Ciise Masiix. Dhacdadani qiyaastii 2000 sano ka hor waxay bedeshay taariikh, xaadir iyo mustaqbal. Maanta waxaan ku nool nahay waqtigii nimcooyinka waana waqtigii annaga, asxaabtii Ciise, loogu yeeri lahayn inaan ku noolaano adeegayaal isla markaana aan ku noolaano nolol macno leh oo macno leh.